कोरोना भाइरस विरुद्वको पहिलो खोप लगाएकी नर्स खोप लिएको केही मिनेट पछि नै बेहोस भै भुइँमा ढलिन (भिडियो) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/कोरोना भाइरस विरुद्वको पहिलो खोप लगाएकी नर्स खोप लिएको केही मिनेट पछि नै बेहोस भै भुइँमा ढलिन (भिडियो)
कोरोना भाइरस विरुद्वको पहिलो खोप लगाएकी नर्स खोप लिएको केही मिनेट पछि नै बेहोस भै भुइँमा ढलिन (भिडियो)
उहाँले अहिले पनि युरोपका कतिपय देशहरुमा महामारीको दोस्रो लहर आएको र यसले गर्दा युरोपका देशहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था देखिएकोले सजगता अपनाउन भन्नुभएको छ । उहाँले आगामी नयाँ वर्षका अवसरमा युरोपमा पहिलेका वर्षहरुमा जस्तै बिदा मनाउने क्रममा पहिलेका वर्षहरुमा जस्तै ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने र समारोहहरु गर्ने गर्नाले कोरोना भाइरसको महामारी झनै विस्तारित हुनसक्ने बताउनुभएको हो ।
युरोपका निर्देशक ह्यान्सले शनिबार भन्नुभएको छ– युरोपमा पछिल्लो समयमा यो महामारी झनै ठूलो मात्रामा बृद्धि भइरहेकोले अहिले झनै सतर्कता र सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बेलायत, जर्मनी र फ्रान्स लगायतका युरोपका कैयौँ देशहरुमा यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएको बताइएको छ ।
गएको शनिबारको तथ्यांकअनुसार युरोपमा मात्र २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नागरिक यो महामारीबाट संक्रमित भएका छन् भने यस महामारीका कारण पाँच लाखभन्दा पनि बढी मानिसको ज्यान गएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले यो चिसोको मौसममा युरोपेली देशहरुमा पहिलेको भन्दा अझ बढी सतर्कता अपनाउनुर्ने पनि बताउनुभएको छ । एक चरणमा निकै समस्यामा परेको युरोप बीचमा निको भयो र प्राय सबैजसो व्यवसाय पनि आफ्नो लयमा फर्किने तयारी गर्दै थियो । तर अहिले आएको दोस्रो लहरले युरोपलाई समस्यामा पार्दैछ । यसबाट युरोपमा अहिलेको चिसो मौसममा महामारी झन् बढ्ने देखिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुले कोभिड–१९ नाम दिएको यो भाइरसबाट विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई यस भाइरस नियन्त्रणको लागि अत्यन्त गाह्रो भएको छ । चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । कोरोनाबाट चीनमा ४ हजार ७५६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९४ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । चीनको हुबे प्रान्तबाट शुरु भएको यस भाइरसको कारण हुबे प्रान्तमा नै धेरैको ज्यान गएको थियो । चीनले हुबे प्रान्तमा ६७ दिनको लक डाउनपछि लगभग रोगलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । चीनको वुहानको जनसंख्या भन्डै एक करोड रहेको छ । त्यसैले उक्त संक्रमणको उत्पत्ति भएको सो क्षेत्रमा सरकारले बढी निगरानी राखेको थियो । चीनको नियन्त्रण गर्ने तरिका कदमलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हनोम गुब्रोहयसोसले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
वैज्ञानिक भाषामा यसलाई ‘२०१९– एन सीओभी’ भाइरस भनिन्छ । उक्त भाइरस कोरोनाभाइरस वर्गको एक खालको नयाँ प्रजातिका रुपमा विकास भएको वैज्ञानिकहरुले बताएका थिए । उनीहरुका अनुसार यो भाइरस यसअघि पनि मानिसमा फेला परेको थियो । वैज्ञानिकहरुले सन् २००० को दशकको शुरुआतमा नै यो भाइरसको प्रकोप बढेको बताएका छन् । उनीहरुले त्यस समयमा विश्वका विभिन्न देशमा यो भाइरसको संक्रमण बढेको र यसले ती देशमा झन्डै ८०० मानिसको ज्यान लिएको सार्स भाइरस पनि एक प्रकारको कोरोना भाइरस नै हो भनेका छन् । यो भाइरस संक्रमण भएपछि खासगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने गर्दछ । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने यस संक्रमणपछिका लक्षणहरु हुन् । यस भाइरसको संक्रमणपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुदै जाने पनि अर्को एक समस्या हो । हाल विश्वका विभिन्न देशमा यस भाइरसका लक्षणहरु पनि विभिन्न थरीका देखिएको छ । लक्षण देखा नपर्दा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखा पर्ने भएको पाइएको छ ।
चीनमा अत्याधिक मात्र कोरोना संक्रमण फैलिए लगत्तै दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, मकाउ र थाइल्याण्डमा फैलिएको थियो । तर हाल विश्वका १९१ देशमा यो भाइरसको संक्रमण फैलिएको जोन हप्किङ्स् विश्वविद्यालयले तयार गरेका तथ्यांकहरुमा देखिएकोे छ । गत जनवरीमा अमेरिकाको सियाटलमा एक जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो । चीनको हुबेबाट केही दिनअघि फर्किएका ती अमेरिकी नागरिकमा यसको संक्रमण भेटिएको पुष्टि भएको थियो । सोही बेलाबाट हालसम्म अमेरिकामा १ करोड ८२ लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने यस संक्रमणको कारण ३ लाख २४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यो आलेख तयार हुदाँसम्म अमेरिकामा १ करोड ३२ लाख भन्दा बढी निको भएका छन् ।
अमेरिकापछि कोरोना संक्रमणको कारण दोस्रो प्रभावित देश भारत रहेको छ । भारतमा कोरोना शुरु भएयता १ करोड ५६ हजार भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन् । यस संक्रमणको कारण भारतमा १ लाख ४६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । अरु देशको तुलानामा भारतमा कोरोना भाइरस निको हुने दर भने बढी रहेको छ । भारतमा हालसम्म ९६ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना मुक्त भएका छन् । तेस्रो संक्रमित देशमा रुपमा ब्राजिल रहेको छन भने ब्राजिलमा हालसम्म कोरोना भाइरसका ७२ लाख ३८ हजार भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित रहेका छन् भने एक लाख ८६ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा ६२ लाख ४५ हजार भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन् । यस्तै बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र यसअघि निकै वि स्फोटक बनेको स्पेनमा पनि यो संक्रमणबाट हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको करिब एक वर्ष पूरा भएको यस समयमा अमेरिकामा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउने बृहत् अभियान थालिएको छ भने त्यहाँ कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने तीन लाख नाघेको छ । अमेरिकामा आउँदो अप्रिल महिनासम्म १० करोड जना मानिसलाई खोप लगाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकामा खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति न्यूयोर्कस्थित लङ्ग आइल्यान्ड जिविस मेडिकल सेन्टरको सघन उपचार कक्षमा कार्यरत एक नर्स भएकी छिन् । कोरोना भाइरस विरुद्वको पहिलो खोप लगाएकी ती महिलाले अमेरिकी इतिहासकै एकदमै पीडादायी समयको अन्त्यको थालनी भएको बताएकी छिन् । उनको यो अभिव्यक्तिसँगै यहाँका नागरिकले पनि अब यो महामारीबाट मुक्ति पाउन सकिने आशामा रहेका छन् ।“अन्य कुनै खोप लगाएजस्तै भएको र खोप सुरक्षित छ भनेर आममानिसमा आत्मविश्वास होस् भन्ने आफूले चाहेको पनि उनले बताएकी छिन् ।
यसैक्रममा अमेरिकारको एक अस्पतालमा कार्यरत नर्स म्यानेजर कोरोनाको भ्याक्सिन लिएको केही मिनेट पश्चात नै बेहोस भएकी छन् । उनी कोरोना भ्याक्सिन लिएर पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो अनुभव बारे बताइरहँदा बेहोस भएकी हुन् । फाइजर बायोएनटेकको कोभिड–१९ भ्याक्सिन लिए पछि टिफेनी डोवर नामकी यी नर्स म्यानेजर लाइभ क्यामेराहरुको अघिल्तिर नै सन्तुलन गुमाउँदै लड्न पुगिन् । उनी लड्ने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित चिकित्सकहरुले उनलाई सम्हालेका थिए ।
टिफेनी नामकी ती नर्स अमेरिकाको टेनेसी सहरमा रहेको सीएचआई मेमोरियल अस्पतालबाट सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गरिरहेकी थिइन् । उनले भ्याक्सिन लिए लगत्तै मिडियालाई सम्बोधन गर्न पुगेकी थिइन् ।क्यामेराको अगाडि रहेकै बेला उनी चक्कर आए झैं भइन् । उनले मिडियासँग कुरा गर्दै “हाम्रो पुरै स्टाफ यो भ्याक्सिन प्रति उत्साहित छ । हामी कोरोना युनिट हौं, यसकारण हाम्रो टिमलाई सबैभन्दा पहिले यो भ्याक्सिन लगाउने मौका मिल्यो,” भनेकी थिइन् ।
यसपछि उनी अलिक असहज जस्तो देखिइन् । र सञ्चारकर्मीसँग माफी भन्दै आफूलाई रिंगटा चलेको बताइन् । तर, यसबारे चिकित्सकहरुले उनी ढल्नु कोरोना भ्याक्सिनका कारण नभई धेरै ठूलो पीडाको महशुस हुँदा प्रायः यसो हुने गरेको बताए ।
रिपोर्टका अनुसार ती नर्स भ्याक्सिन लगाएको १७ मिनेट पछि बे’होस भएकी थिइन् । यस बारेमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनले जुनकुनै भ्याक्सिनले पनि बेहोसीको समस्या हुनसक्ने उल्लेख गर्दै प्रायः बेहोसी पीडा र बेचैनीमा हुने बताएका छन् ।
She is feeling better. ??#COVID19 #vaccine #Tennessee
टिकटक कलाकार निकिशालाई सडकमै यस्तो गर्ने को हुन् ? प्रहरीले थाल्यो कारवाही (भिडियो हेर्नुस्)
मोटरसाइकलमा निस्केका श्रीमानको जङ्गलमा भेटियो शव, श्रीमतीलाई अन्तिम पटक फोनमा यसो भनेका रहेछन (भिडियो सहित)